Ubumsulwa nedayimani opredelyayaet Chic yinkimbinkimbi zonke imihlobiso
Emhlabeni wonke, kodwa kukholakala ukuthi abasunguli Imi idayimane master Indian. Lokho zisatholakala endulo waqaphela izimfanelo ezinhle zomuntu lezi ngamatshe amahle ngokungavamile nenhle. Nokho, izindlela lasendulo usike, yebo, ungahambi kunoma ziqhathaniswa izindlela zamanje, okuvumela embulele emhlabeni izimfanelo obugagu, ubuhle kanye ubumsulwa nedayimani. Amakhosi asendulo umane iphathwa idayimane, njengokulindelekile ubuso, enkulu kangaka ukukhanya etsheni wahlala ezingafinyeleleki ngokubona okubonakala ngeso lenyama. Kuze phakathi nekhulu leminyaka eledlule, Marcel Tolkowsky, umsunguli cut yesimanje, usebenzisa zezibalo ukudala ukuma esiphelele itshe, okuyinto kudala izimo eliphezulu play sokukhanya Ukukhalipha etsheni.
Lapho ekhetha yedayimane ukwazi abantu basebenzisa kokubusa ezine "C» Carat (ngesilinganiso carats), le ngokucacile (nokuhlanzeka), umbala (umbala), futhi-cut (cut), kuhlanganise yebo inkomba eyinhloko isisindo (elikhulu idayimane, le ezibizayo). Akhuluma ngokuzokwenzeka idayimane umbala Ochwepheshe baye ebhekisela ngokuntula kwakhe okuphelele - itshe ephelele Ayinambala nalapho ibekwe emanzini babe ongabonakali. It yahamba inkulumo ethi "diamond yamanzi okumsulwa." Ubumsulwa idayimane kunqunywa ukungabi khona imifantu, chips nezinye ukukhubazeka zangaphakathi, wamukela ngezigaba esabela esezingeni amadayimane ekilasini lokuqala, namatshe zinokukhubazeka encane ukuba 3-4 ekilasini. amatshe Sika kungokwalabo izakhi okuhlobisa kanye zakudala round ukuma ayikwazi ukushaya.
cut uhlobo ngokuvamile ezikhethiwe kusuka ukuma yokuqala idayimane, ngamunye wabo e yayo kubonakala intuthuko, Chic, futhi ukuhlanzeka idayimane. Mina izibiliboco Umumo Ingxenye ye impahla eluhlaza esele ngemva kokucubungula itshe isikhathi eside, ngakho ishibhile. Jewelers eziningi zikholelwa ukuthi ekuqaleni cut engcono senziwa ifomula ekhethekile evumela diamond ukunikeza ukukhanya esiphezulu futhi ukuhlanzeka nedayimani. Ibalwa okusekelwe olinganise formula indaba kokuqala, isilinganiso uyakucabangela hhayi kuphela ukujula, kodwa futhi ububanzi endaweni ziphathwe ububanzi we idayimane. I enhle cut idayimane esasivumele ukuba sinikeze saturation esiphezulu nokukhanya, ngenxa ubuncane endaweni idayimane uthola amandla esiphezulu kusakazeka ukukhanya.
Lapho uthenga idayimane imigexo kufanele sinake inani ubuso, kumelwe nakanjani kube kukhonjisiwe incazelo ubucwebe. Ngokuzimela ukunquma ubuqiniso imigexo umuntu ovamile engingeke ngikwazi ukuyikhokhela, ngakho kungcono kakhulu acele imibono lochwepheshe. Uma idayimane kuyinto olingene, isiqinisekiso yayo bobuqiniso zingaba kanye idumela salon ubucwebe noma esitolo lapho kuthengiswe. Lapho uthenga izinto zokuhloba okukhethekile kakhulu umeme isazi ezinhle ezimele noma oda luhlolo gemological. Kuze kube manje, Imi zakudala nedayimani ubhekwa round Umumo 57 ubuso, ngaphezu, hhayi ukuncishiselwa fancy encane ethandwa emise ( "okusaqanda", "Inkosazana", "Marquis", "ipheya", "inhliziyo").
Ujabule ukuthi amadayimane Uyi amantombazane umngani omkhulu, akunjalo neze iqiniso lelo, ngoba ayebuthaka futhi kukhanye kunamatshe ayigugu agcizelele ubuhle kweqiniso nangobuciko lomuntu abasha. Diamond imigexo ziphelele, njengoba kusihlwa noma ibhola ingubo, kanye isudi seductress enhle. Abakwazi kuhlangene yisiphi isithombe, noma yimuphi izingubo futhi ungesabi ukuba kubonakale buthuntu futhi esivikelekile. Into ebaluleke kakhulu ukukhumbula lapha ukubaluleka kweqiniso alikho ubukhazikhazi futhi ukubaluleka itshe, futhi ngobuqotho bezinhliziyo umphefumulo womuntu ukuthi sisinikwa zivela phezulu, futhi zenani engengaphansi kwengu-ubumsulwa nedayimani.
Umuthi 'Tioril ": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Ungayenza kanjani imibiko ku "The Sims 4": izindlela eziyisisekelo nezinkinga kungenzeka
Isikhafu ipayipi-hook: incazelo kanye izikimu
Ezidabukile emalungeni ezandleni nasezinyaweni, yini okufanele uyenze? Ubuhlungu emalungeni izingalo nemilenze: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Indlela aphonse imali komunye ikhadi Savings Bank: zonke izindlela